ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြားသည့် ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား | LA KT Legal Services
Municipal Law:Public & Private
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် န၀မပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာနဲ့ တက်ရောက်လာကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံး ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခများနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ စတင်ကျင်းပတဲ့ န၀မပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလအတွင်းမှာ ဆွေးနွေးကြရမယ့် ဥပဒေကြမ်းများအနေနဲ့ (၂၃) ခုရှိပါတယ်။ အဆိုများအနေနဲ့ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးရန် ကျန်အဆို (၄) ခုနဲ့၊ အသင့်ဖြစ်အဆို (၃) ခုရှိတဲ့အတွက် ဆွေးနွေးရန် အဆိုစုစုပေါင်း (၇) ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းများအနေနဲ့ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ န၀မပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ပြောင်းရွှေ့မေးမြန်းထားတဲ့ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၃၇) ခု အပါအဝင် အသင့်ဖြစ်ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း (၁၅၆) ခု ရှိပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်
No.24-D,2nd floor, Nanattaw Street, Kamaryut Township,Yangon, Myanmar.
Opening Hours:Mon-Fri 8am-5pm.
© 2018-2021 LA KT Legal Services . All rights reserved.